🥇 ▷ Procon-SP wuxuu ganaaxayaa Google iyo Apple ilaa $ 10 milyan sababta oo ah FaceApp ✅
Procon-SP wuxuu ganaaxayaa Google iyo Apple ilaa $ 10 milyan sababta oo ah FaceApp
Mu’asasada ‘Procon-SP Foundation’ ayaa ganaaxday Google ku dhawaad ​​R $ 10 milyan, iyo Apple R $ 7.7 milyan, iyaga oo ku eedeeyey jebinta Xeerka Ilaalinta Macaamiisha (CDC) iyagoo bixinaya FaceApp loogu talagalay iPhone iyo Android iyadoo aan shuruudo lagu dhigin afka Boortaqiiska Intaas waxaa sii dheer, hay’addu waxay leedahay labada shirkadood waxay dejiyeen shuruudo aan caddaalad ahayn siyaasadahahooda gaarka ah iyo shuruudaha adeegsiga. Google ayaa racfaan ka qaadan doonta go’aanka.
Marka loo eego FaceApp, shuruudaha adeegsiga iyo siyaasadaha asturnaanta ayaa lagu heli karaa Ingiriisiga oo keliya. Procon-SP wuxuu leeyahay kani wuxuu jabiyey CDC: sharciga wuxuu dhigayaa in badeecad kasta ama adeeg kasta oo lagu bixiyo Brazil ay kujirto “sax, cad, sax, dhaaf iyo macluumaadka luqada Boortaqiiska.”
Google, Apple iyo FaceApp ayaa la ogeysiiyay bishii Luulyo si ay u sharxaan macluumaadka aruurinta xogta iyo siyaasadaha kaydinta. Google iyo Apple waxay yiraahdeen kaliya waxay u fidiyaan app-ka isticmaaleyaasha Play Store iyo App Store, sidaa darteed iyagu mas’uul kama ahan.
Si kastaba ha noqotee, CDC waxay cadeyneysaa in adeegbixiyaha uu la wadaago mas’uuliyadda shirkadda abuuray. “Markaa Google iyo Apple waxay la xisaabtamayaan maqnaanshaha macluumaad ka yimid dalabka loo yaqaan ‘AppApp’, ‘ayuu ku doodayaa Procon-SP. (FaceApp kama uusan jawaabin ogeysiiska.)
Google iyo Apple waxay leeyihiin shuruudo aan caddaalad ahayn, ayuu yidhi Procon-SP
Hay’addu waxay sidoo kale go’aansatay inay ku ciqaabto labada shirkadood tikniyoolajiyada shuruudo caddaalad darro ah. Google iyo Apple waxay ku sheegaan siyaasadahahooda gaarka ah inay la wadaagi karaan macluumaadka isticmaalaha asxaabta, bixiyeyaasha adeegga iyo dadka saddexaad.
Marka loo eego Procon-SP, tani waxay xad gudub ku tahay Internetka ‘Marco Civil da Internet’, kaas oo bixiya xaquuqda “in aan la siinin dhinac saddexaad xogtooda shaqsiyadeed … marka laga reebo iyada oo bilaash ah, muujinta iyo ogolaanshaha la wargeliyey”.
Google iyo Apple waxay ka digayaan in macluumaadka macaamiisha loo wareejiyo wadamada kale iyada oo aan la mid ahayn sharciyada ilaalinta macluumaadka ee Brazil, “taas oo macnaheedu yahay tanaasulida xuquuqda”, sida laga soo xigtay Procon-SP.
Google waxaa lagu ganaaxay $ 9,964,615.77, lacagta ugu badan ee ay dejisay CDC; halka Apple ay heshay ganaax dhan $ 7,744,320.00. Ganaaxyada waxaa lagu soo rogi doonaa iyada oo loo marayo nidaamka maamulka, shirkadahana waxay u dacwoon karaan maxkamadda.
Hadal qoraal ah oo loo diray Tecnoblog, Google ayaa sheegtay inay racfaan ka qaadan doonto go’aanka. Shirkadda ayaa sheegtay “Qaabka Nidaamka Madaniga ah ee Internetka iyo Xeerka Ilaalinta Macaamiisha lafteeda ayaa sheegaya in dukaamada khadka tooska ah ee internet-ka aan laga qaban doonin wax ka qabashada dhaqamada iyo siyaasadaha codsiyada dhinac saddexaad ah, sidaa darteed waxaan qaadi doonaa talaabooyinka lagama maarmaanka ah si aan uga hortagno ganaaxyada ay soo rogtay shirkadda ‘Procon’, ayay tiri shirkadda.
Maxaa ku dhahay Google iyo Apple siyaasadaha gaarka ah
Waa tan waxa Google ayaa ku qoran siyaasadahaaga qaaska ah oo ku saabsan wadaag xogta isticmaale:
Waxaan siinnaa macluumaad shaqsiyadeed laxiriirayaasheena ama shirkadaha kale ama dadka aaminka ah si ay uga baaraandegaan macluumaadka noocaas ah annaga… Tusaale ahaan, waxaan u adeegsanaa bixiyeyaasha adeegga inay naga caawiyaan taageerada macaamiisha.
Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka shaqsi ahaan lagu aqoonsan karin guud ahaan iyo la-hawlgalayaashayada – sida daabacayaasha, xayeysiiyayaasha, horumariyeyaasha, ama kuwa heysta xuquuqda. Tusaale ahaan, waxaan u wadaagnaa macluumaadka si guud si aan u tusno isbeddelada ku saabsan guud ahaan adeegyadeena.
… Waxay ku saabsan tahay wareejinta xogta:
Waxaan leenahay adeegayaal adduunka oo dhan macluumaadkaagana waxaa laga baaraandegi karaa server-yada ku yaal dibedda dalka aad ku nooshahay. Shuruucda ilaalinta macluumaadka ayaa ku kala duwan dalkoo dhan, qaarkood ayaa bixiya difaac ka badan kuwa kale. Ayadoon loo eegin meesha macluumaadkaaga laga baaraandego, waxaan ku dabaqnaa isla ilaalintii lagu sharxay siyaasadan.
Dhanka kale, Apple wuxuu ku sharraxaa siyaasadiisa qaaska ah shuruudaha wadaag xogta:
Waxaa lagaaga baahan karaa inaad bixiso macluumaadkaaga shakhsiyeed wakhti kasta oo aad la xiriirto Apple ama shirkad Apple ku xiran. Apple iyo kuwa aad iska kaashanaysaa way wadaagi karaan macluumaadkan qofba midka kale waxayna u isticmaali karaan hab ku habboon Xeerka Asturnaanta.
Waxay sidoo kale ku dari karaan macluumaad kale si ay u bixiyaan oo ay u horumariyaan alaabadayada, adeegyadayada, waxyaabaha ku jira iyo xayeysiinta. Lagaagama baahna inaad bixiso macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aan codsanay, laakiin haddii aad dooratid inaadan bixin, xaaladaha badankood kuma awoodi doonno inaan ku siino alaabadayada ama adeegyadeena ama uga jawaabno su’aalahaaga.
Sida loogu wareejinta xogta, waxay tiri:
Dhammaan macluumaadka aad bixiso waxaa loo wareejin karaa ama laga gaari karaa hay’adaha adduunka oo dhan sida lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah … Apple, shirkad caalami ah, waxay leedahay dhowr hay’ado sharciyeed oo ku kala yaal xukumooyin kala duwan kuwaas oo mas’uul ka ah macluumaadka shaqsiyadeed ee ay aruuriyaan oo laga baaraandego iyaga wakiilkooda Waxaa qoray Apple Inc…
Macluumaadka shaqsiyeed ee la xiriira Apple, Dukaanka Internetka, iyo iTunes waxaa sidoo kale xakameyn kara hay’adaha sharciga ee ka baxsan Mareykanka, sida lagu bixiyo adeeg kasta.
Macluumaadka: Procon-SP. La cusbooneysiiyay 1:40 pm.